नेपाल आज | ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउनेले ‘प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउनु हास्यास्पद
‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउनेले ‘प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउनु हास्यास्पद
ओली र प्रचण्ड दुवै ‘भिजनलेस’ र ‘कन्फ्यूज्ड’
यो बडा अचम्म छ । फागुन १ गते सत्तारुढ दल नेकपाले धुमधामसंग ‘जनयुद्ध’ दिवस मनायो । यद्यपि यो जनयुद्ध भन्ने शब्दलाई वर्तमान संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले चिन्दैन, पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व तत्कालिन नेकपा एमालेले पनि चिन्दैन थियो, तर अहिले पूर्व एमालेका नेताहरुले पनि धुमधामसंग यो ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाए ।
२००७ साल फागुन ७ गते राणालाई हटाएर प्रजातन्त्र आएको दिनको सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । जनयुद्ध चाहिं तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेकोे सशस्त्र युद्धको सम्झनामा सो युद्धका समर्थकहरुले मनाउन थालेका हुन् ।
तत्कालिन माओवादीले २०५२ अघिको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेको हो । यदि २००७ सालमै आएको प्रजातन्त्र दिवसप्रति गर्व छ भने जनयुद्धको औचित्य के ? जनयुद्धको सुरुवातले फागुन ७ गतेको सान्दर्भिकता मारेको होइन र ?
प्रचण्ड र ओली दुवै ‘कन्फ्यूज्ड’ नेता
संविधानविद् एवम वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तत्कालीन नेकपा माओवादीका त्यसका नेताहरु अहिले पनि ‘भिजनलेस’ भएको बताउँछन् । द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड मात्र होइन अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपनि ‘कन्फ्यूज्ड’ नेता भएको उनको ठहर छ ।
पार्टी तथा सरकार संचालनमा के गरौं के गरौं भन्ने अवस्थामा उनीहरु रहेकाले हडबडमा जथाभावी बोल्ने र निर्णय हुन थालेको उनको बुझाइ छ । उनीहरुका गतिविधि र निर्णयले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न थालेको उनको आरोप छ । सामाजिक संजाललाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना र प्रविधि सम्बन्धी कानूनमा जे व्यवस्था गरेर ल्याईदै छ त्यो आधुनिक प्रजातन्त्रका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको ठहर छ ।
प्रजातान्त्रिक चरित्र कसैको भएन
२००७ सालयता जतिपनि दल र नेताहरु आए ती सबैले प्रजातान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न नसकेको र यसले गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेको त्रिपाठीको बुझाइ छ । चाहे राजा होस वा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, कसैले पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसक्दा लोकतन्त्रप्रति मानिसहरुको बितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिलेको सरकारले त सुरुवातदेखि नै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेको छ । काठमाडौंमा बिभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्न खोज्यो, पशुपतिको गीतलाई यु ट्यूबाट हटाउन लगायो, आफना बिरोधीहरुलाई खोजि खोजि मुद्दा लगाउने, तनाव दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानून बनाउने आदि कुरा लोकतन्त्रसम्मत छैनन् । ’ त्रिपाठी बताउँछन् ।
बिदेश जाने गंगामायाको आफनै इच्छा
द्वन्द्वकालमा छोरा मारिएपछि न्यायका लागि संघर्षरत गंगामाया अधिकारी आफनै इच्छाले बिदेश जान लागेको त्रिपाठीले बताए । गंगामायामा राजनीतिक चेतना उच्च भएको जानकारी दिंदै त्रिपाठीले उनलाई सरकारले दिने धन सम्पत्ती र प्रलोभनप्रति कुनै रुची नभएको उनले स्पष्ट पारे । जबसम्म बेलायतमा लुकेर बसेका रुद्र आचार्य नामका व्यक्ति पक्राउ पर्दैनन्, तबसम्म गंगामाया शान्त नबस्ने त्रिपाठीको भनाइ छ ।
आफूहरुले एउटा निरीह महिलाको भावनाको कदर गर्दै र दण्डहीनता नहोस भन्ने उद्देश्यकासाथ मात्र अधिकारीलाई साथ दिएको उनी बताउँछन् ।
धम्की मलाई पनि आउँछ
खासगरी कम्युनिष्टप्रति निकै कटु आलोचना गर्ने त्रिपाठी गंगामायाको न्यायको कुरा गर्दा आफूलाई पनि थुप्रै धम्की आएको स्वीकार्छन् । आफू अर्थपूर्ण जीवन बाँच्नुपर्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेकाले यस्ता धम्कीले आफनो काम नरोकिने उनी दृढताकासाथ भन्छन् ।